Fonqolcha mootummaa Gaaboon: Afriikaatti yaaliin mootummaa fonqolchuu xiqqaachaa dhufeeraa? - BBC News Afaan Oromoo
Fonqolcha mootummaa Gaaboon: Afriikaatti yaaliin mootummaa fonqolchuu xiqqaachaa dhufeeraa?
Goodayyaa suuraa Loltoota Zimbaabuwee
Yaaliin mootummaa fonqolchuu Gaaboonitti amma ta'e kun erga bara 1960n keessa turen booda isa jalqabaati.
Wiixata darbe ganama, gareen qondaaltota loltoota dargaggeeyyii "dimokiraasii deebisna" jechuudhaan aangoo qabachuuf yaalanii turan.
''Shirri xaxamee ture mo'atamee haalli jiru to'annaa jala ooleera," jedhe mootummaan.
Pirezedaant Alii Boongoo yeroo ammaa dhibee dhiigaa qaama keessatti dhangala'uutiin Morookootti wallaansa fayyaa argachaa jiru. Maatiin isaanii erga bara 1967 irraa kaasanii Gaabooniin bulchaa jiru.
Maqaan Ardii kanaa fonqolcha mootummaa ilaalchisee jiru garamitti deemaa jiraa?
Fonqolchi mootummaa yoom raawwatame?
Akka qorannoo saayintistoota siyaasaa Yunvarsitii Senteraal Filooriidaafi Kentaakii, Jonaataan Paawoliifi Kiliitoon Tiin jedhanitti bara 1950n keessaa jalqabee fonqolcha mootummaa walumaa galatti 204 Afrikaa keessatti taasifamaniiru. Lakkoofsi kun fonqolcha mootummaa yaalamaniifi milkaa'an dabalata.
Hiika hayyoonni kun fonqolcha mootummaatiif kennan akka jedhutti, yaalii seeraan alaa ykn karaa hin taaneen loltootaan ykn namoota aangoorra jiran birootiin gaggeessitoota aangoo irra jiran kuffisuuf yaaluu ykn kuffiisuudha.
Haata'u malee, hiikni fonqolcha mootummaa falmisiisaa kan ta'eefi dur gaggeessitoonni kana gochuu akka ta'e waakkachaa turaniiru.
Fakkeenyaaf yoo fudhanne, Zimbaabuwee keessatti bara 2017 gaggeeffameera. Fonqolcha mootummaa loltuunni gaggeessaniin waggoota 37 kan biyyattii bulchan Roobert Mugaabeen akka aangoo gadi gadhiisu taasisaniiru.
Yeroo kun ta'utti qondaalli waraanaa ol-aanaa Maajar Jeneraal Sibuusisoo Mooyaa TV irratti yeroo dubbatan fonqolcha osoo hin taane humni waraanaa to'achuudha jedhan.
"Gaggeessitoonni fonqolcha mootummaa bifa gara garaan mootummaa fonqolchuu isaanii ni haalu, kunis yaalii hojiin isaanii sirrii ta'uu mul'ifachuudha" jedha Paawel.
Goodayyaa suuraa Loltoonni yeroo buufata TV'tti dhiyaatanii aangoo mootummaa to'anneerra jechuun beeksisan
Hayyoonni siyaasaa kun lamaan akka kaa'anitti fonqolchi mootummaa milkaa'aadha jedhamu kan guyyoota torbaan ol turuu danda'udha.
Afriikaa keessatti, fonqolcha mootummaa fashalaa'anii 104 fi kan milkaa'an 100 taasifamaniiru.
Hunda caalaa Sudaan fonqolchawwan mootummaa hedduu qabdi. Kunis 14 ta'uu isaati. Burkinaa Faasoon kan milkaa'e toorba gaggeessisteetti.
Afriikaan loltuunni aangoo to'achuu xiqqaa argaa dhufteettii laata?
Afrikaan loltoonni aangoo to'achuu lakkoofsaan hunda caalaa dabarsiteetti garuu karaa akkasii kanaan jijjiirama dirqisiisuun gadi buhaa dhufeera.
Baroota 1960-1999 gidduutti, tokkoo tokkoo wagoota kudhan baroota kana gidduu jiran keessatti fonqolchawwan 39 hanga 42 ta'anitu gaggeeffame. Waggaa kurnan darbe kana keessa ammoo 16 qofaa ture.
Paawel akka jedhutti rakkoo tasgabbiin dhibuu erga sirna gita bittaa jalaa baate Afrikaan mudate yeroo ilaalan kun kan nama ajaa'ibus miti.
"Biyyoonni Afriikaa haalawwan fonqolcha mootummaa raawwachuuf dhiibbaa qaban akka hiyyummaafi rakkoo dinagdee fokkisaa ni qabdi.
"Biyyaa fonqolchi mootummaa takka keessatti gaggeeffames kan biraan akka jiraatuufillee yeroo bayyee karaa ni saaqa," jedha Paawel.
Akka seenaatti biyyoota Afriikaa keessatti, loltoonni ce'umsa gara dimokiraasiifi dhimmoota biyya keessaafi nageenyaa keessatti ga'ee guddaa taphataniiru.
Akka addunyaatti maal fakkaata
akka addunyaatti, lakkoofsi fonqolcha mootummaa gaggeeffame 475 ni ta'a.
Kanaaf, Afrikaan warra kaanirra fonqolcha mootummaa keessumsiifteetti.
Kan iti aanu Ameerikaa Kibbaadha. Ardii kana irrati fonqolcha mootummaa walumaa gala 95 taasifaman keessaa 40 kan milkaa'anidha.
Goodayyaa suuraa Venzuweelaa keessatti dubartoonni yeroo morman
Haata'u malee, waggoota digdaman darban keessa Ameerikaa Kibbaa keessatti fonqolchi mootummaa xiqqaachaa dhufeera. Fonqolchi dhiyoo gaggeeffame kan bara 2002 Pirezedaantii Venezuweelaa Huugoo Chaaveez irratti gaggeeffamee hin milkaa'iin hafedha.
Eeshiyaa keessattis fonqolchi mootummaa xiqqaachaa dhufeera.
Loltoonni gara masaraa mootummaa imalan dhiifama gaafatan
12 Onkololeessa 2018
To'annaan Zimbaabwee fonqolcha fakkaata jedhe Gamtaan Afrikaa
Omaar al Bashir marsaa sadaffaaf akka dorgomuuf yaadni heera jijjiiruu dhiyaate
Ikuwaatoraal Ginii 'yaalii fonqolcha hidhattootaa hambifte'
Yaalii mootummaa fonqolchuu Gaabon: Loltoonni yaalii fonqolcha mootummaatti hirmaatan lama 'ajjeefaman'
'Nama murteessuun isa dhibuuf yuuniversitiin qormaata'
Shawaa Roobiititti ajjeechaan haadhaa fi daa'imaa dheekkamsa kaase
Samsung mobaayila akka kitaabaa dadacha'u tolche
Loltoonni suuraa akka hin kaasne Raashiyaan dhorkite